Goorma ayey Adeegga Masruufka Rize-Artvin bilaabi doonaan adeegga? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir08 ArtvinGoorma ayey Adeegga Masruufka Rize-Artvin bilaabi doonaan adeegga?
07 / 01 / 2020 08 Artvin, 53 Rize, GUUD, Garoomada, Gobolka Banaadir, WADADA, Headline, TURKEY
garoonka diyaaradaha farshaxanka riwaayadaha badh ayaa la dhammeeyay
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha 766 hektar oo aasaas u saadaaliyey la dhigay by 2,5 sano ka hor, Ra'iisul-wasaare Recep Tayyip Erdogan, garoonka diyaaradaha 2aad Turkey ee Rize- dhisay badda ku qabanaysa 52 boqolkiiba Airport Artvin dhammaadeen.
Dhismaha garoonka Diyaaradda Rize-Artvin, oo ay dejisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhul gariir dhan 766 hectare oo kuyaal Yeşilköy, degmada Rize ee Pazar oo uu dhigay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan 3dii Abriil, 2017, 266 milyan oo tan oo dhul ah ayaa loo dhisay 88,5 hektar oo dhul ah. dhagax loo adeegsado. Meesha ay ku jiraan 150 baabuur oo xamuul ah habeen iyo maalinba, buuxinta badda ayaa sii socota. Ka sokow gawaarida waaweyn, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa laba markab oo kuwa qodista ah. Qiyaastii ku dhawaad ​​2 kun oo tan oo buuxin ah maalin kasta dhismaha garoonka diyaaradaha, socodsiinta waddo-mareenka ayaa wali socda. Kanlımezra, oo 120 kiiloomitir u jirta goobta mashruuca iyo dhagaxyada Tektaş, oo 3 kiiloomitir u jira, ayaa lagu xambaaraa gawaarida waaweyn badda dhexdeeda iyada oo loo marayo wadada isku xirka.
Dhagxaanta ay ka buuxaan gawaarida waaweyn ee loogu talagalay maraakiibta qodista waxaa lagu daadgureeyaa badda meel 28 mitir u jirta. Bedka gudaha ee mooluhu wuxuu noqon doonaa ku dhawaad ​​2 milyan oo mitir murabac ah iyo wadar ahaan 2 milyan 400 kun oo mitir murabac oo badda la buuxin doono. 52 boqolkiiba ee mashruuca ayaa la dhammeystirey, qashin-qubka iyo buuxinta wax-soo-saarka guud ee wadooyinka, buun-buuninta iyo meelaha tagaasida ee Maarso 2020 aasaaska, salka-hoosaadka iyo wax soo saarka daaha ayaa la qorsheeyay in la bilaabo. Waxaa la filayaa in ay isticmaalaan 3 milyan oo rakaab ah sanadkii, howlaha kaabayaasha ee garoonka Rize-Artvin, waxaa ku kici doona 1 bilyan 78 milyan oo gini.
Rize iyo Airport Artvin in tirada dhif ah ee dunida, garoonka diyaaradaha labaad ee dalka Turkiga ayaa buuxin badda. Waxay leedahay dhul dhan oo buuxinaya 2 milyan 600 kun oo mitir oo laba jibbaaran. 85 milyan 500 kun oo tan oo buuxin ayaa laga samayn doonaa maddaarka. Si hawshan loo sameeyo ku dhawaad ​​300 oo mashiin ayaa shaqeeya 24 saacadood.
Ku biirista garoonka Rize-Artvin Airport xagga dalxiiska sidoo kale wey fiicnaan doontaa. Marka la raaco garoonka diyaaradaha, meelaha sare ee Badda Madoow waxay noqon doonaan kuwa si fudud loo gaari karo. Ganacsiga, gaadiidka, saadka, gobolka wuxuu lahaan doonaa adeegyo badan. Ovit Tunnel, oo loo malaynayo in lagu rakibay garoonka ayaa la dhammeystirey. Dekadda İyidere ee saadka ayaa bilaabeysa sanadkaan. Wax soo saarka bariga iyo koofurta bari wuxuu hada gaari doonaa dekada logistics iyo garoonka diyaaradaha İyidere waqti aad uga yar sidii hore. Laga soo bilaabo halkan, gaadiid aad u badan oo deg-deg ah, dalxiis iyo ganacsi oo loo tago Caucasian iyo wadamada Aasiya ayaa la qorsheeyay.
Tallaabo adag oo loogu talagalay Garoonka Rize-Artvin
Garoonka diyaaradaha ee Rize-Artvin ayaa maanta lagu qaban doonaa (Video)
Ergaygaan ka socda Erdogan iyo dhismaha Rize-Artvin Airport
Soo-saarka Emulsion Asphalt, Maqaarka dusha sare iyo Kaplama